IRed Encwadi Khanty-Mansiysk - iwuhlu kuchazelwe ka zezinyoni ezingavamile futhi ezisengcupheni ka yezimila nezilwane ezihlukahlukene. Ikhombisa endaweni yabo yokusabalalisa, incazelo morphological, inombolo bese izizathu ukunciphisa yayo. Futhi libala izinyathelo kwenziwe ukuze ulondoloze le zezinyoni ezingavamile, futhi Izibikezelo kungenzeka ku ikusasa layo. IRed Encwadi Yugra yasungulwa ngo 2003. Kule minyaka edlule khona iye efunde egciniwe entsha mayelana yezimila nezilwane ezihlukahlukene zale ndawo. Abaningi amaqiniso okwase zithuthukiswe, futhi engu-10 kamuva, ngo-2013, incwadi entsha, eyayihunyushwe kushintshiwe ngokufanele. Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Isendlalelo ukuvela Red Encwadi Yugra
Khanty-Mansiysk Autonomous avtonomnyy amumethe izitshalo eziyivelakancane nezilwane. Kodwa le mfuyo - kuphela ingxenye encane yemvelo engafani alahlekile. Ngenxa yokwephula izimo zemvelo e zokungcebeleka kulo ukuthi emakhulwini amaningana eminyaka irrevocably wanyamalala 15% azo zonke izinhlobo eziye zaba khona kule nsimu. Ngokusho kochwepheshe kakade kwekhulu lama-20 le nombolo wasondela 72%. Ngeshwa, lokhu ukulahlekelwa awushintsheki, ubunjalo County wahlupheka umonakalo omkhulu. Ososayensi bathi esifundeni ngeke kuphinde kufane, kodwa usafuna ugcine labo zinhlobo ezisele. Ibonisa kuphela ukukhathalela okuqotho ngemvelo ungashiya izizukulwane zethu nengxenye, ngisho nencane, kodwa amagugu ecebile.
Izizathu nokuncipha zinhlobo ukwehluka
Nature KhMAO Kugcizelela ne ukwehlukana kwayo. Ngeshwa, imiphakathi yamazwe izilwane ngonyaka encishisiwe. Kungasekho nezitshalo. Isizathu esiyinhloko lezi izinqubo - ke siwukubhujiswa ngesihluku, ekubhujisweni ukungcoliswa komhlaba. Ngaphezu kwalokho, indima ebalulekile eyadlalwa ukuvuna nokubhujiswa engalawuliwe kwemiphakathi kokubili ezitshalweni nasezilwaneni. Lesi simo yashubisa ukwethulwa kwezinhlobo alien ezingaphansi kwalelo gatsha. Ososayensi esifundeni ezizimele kukhona umbuzo yokulondoloza imiphakathi enjalo. Kuyadingeka ukuba alondoloze hhayi kuphela izilwane kanye nezitshalo kodwa futhi izindawo zabo. Kuyinto lezi zinselele futhi babe bababonisi Red Encwadi Yugra.
Red Incwadi KhMAO
IRed Book - kuyinto wokuqala nomkhulu kunabo bonke nencwadi engokomthetho. It uhlanganisa bonke idatha kanye nolwazi ku ukusatshalaliswa kanye nesimo ka zezinyoni ezingavamile isilwane nokuphila plant. Lo mbhalo futhi libonisa zonke izinyathelo ezithathiwe ukuze kuvikeleke imiphakathi yazo. KhMAO Red Incwadi enikeza ulwazi mayelana ezincelisayo, izinyoni, izinambuzane, izilwane ezihuquzelayo, izilwane eziphila emanzini nasezweni, inhlanzi, izitshalo ephakeme, wona, Izinhlobo nesikhunta, okuyinto yokuqothulwa. Ngesikhathi sokushicilela ezandleni yesayensi babengenalo idatha eqondile isimo imvelo esifundeni. Ucwaningo we esifundeni ezizimele etholakala ngezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ibingeyinhle neze. Idatha ukuthi baye baqoqa ngokucophelela bit by bit. Ngakho, ngo-edition lokuqala, eyanyatheliswa ngo-2003, kuhlanganisa izitshalo 140, izilwane 71, 16 zama-isikhunta. Kodwa wayengeyona olunembile hhayi uhlu oluphelele. Ngaphezu engxenyeni eyinhloko futhi isicelo kukhona kule dokhumenti. Lalimnikeza imidwebo we 8 zezilwane, 45 izitshalo kanye 9 amakhowe, okuyinto siyakudinga ukunakwa izazi zesayensi yezinto eziphilayo futhi kwemvelo.
Ngo 2013 wakhipha umqulu ncwadi Red KhMAO kumagazini omusha. Yayiqukethe inombolo enkulu ngezilwane ezisengozini yokuqothulwa. Engezwe ezincelisayo, otshala Izinhlobo wona, ulele athile kanye nesikhunta. isimo ezinye izinyoni nazo sibuyekezwe. kunezinhlobo zezintuthwane eziningana bangafakwa Encwadi Red. Kwehliswe futhi isibalo izinambuzane. Wild ayenziwa ngesikhumba ezincelisayo caribou, ngiyiphi inomboro iye kancane kancane kuncipha. amalulwane Ikakhulukazi eziphawulekayo. Ithathwe ngaphansi kwesivikelo amanzi echibini bat, enyakatho futhi ezimbili ithoni isikhumba jacket. Kwathiwa ingezwe ku-obelungaziwa ngaphambili zezimbali.
izilwane Okuvikelwe Khanty-Mansi Autonomous avtonomnyy
IRed egwalweni Khanty-Mansi Autonomous District kuhlanganisa zezinyoni ezingavamile ezincelisayo, izinyoni, izitshalo, ngisho isikhunta. Nokugcina kwaba West-beaver yaseSiberia uhlala phezu emabhange emadanyini esifundeni. Kodwa ukuhlukahluka ngempela Khanty Red List of izinyoni. Bangabakhe oda ezahlukene futhi uthathe ezihlukahlukene niches begazi. Lokhu izinyoni ezinkulu ezizingelayo ezifana nengqungqulu, emhlophe - tailed ukhozi, merlin, peregrine uheshe, isikhova ukhozi, ezivamile uju Buzzard, ukhozi. Futhi evikelwe zithathwa izidalwa enhle kanjena elimhlophe kanye crane grey, Gray Plover, Oystercatcher, Dunlin, Arctic Skua, Ural Dipper. Zonke lezi zinhlobo manje zisengozini yokuqothulwa. Inani elikhulu ososayensi njalo ukuqapha inani labantu babo, enze okusemandleni ukuba ukwandisa isibalo sabo.
Futhi eNcwadini Red afakwe zezinyoni ezingavamile izilwane zasemhlabeni, ezihuquzelayo - emincanyana isibankwa, okuvame Newt, eSiberia futhi frog utshani. Yehlelwa, ososayensi kanye nabamele izinhlanzi. Ngaphansi kokuvinjelwa esiqinile Sifikile amateur ukudoba trout futhi Sturgeon laseSiberia. Izitshalo KhMAO zihlukaniswa inala zezinyoni ezingavamile eziqhakazayo, Izinhlobo, wona. Zonke e Red Encwadi esifundeni zikhona 156 abamele, ezingu-16 zazo zinhlobo - amakhowe. Kodwa kufanele kuphawulwe ukuthi ucwaningo yezimila nezilwane ezihlukahlukene zale ndawo yenziwa kuze kube yilolu suku. Hhayi uphenyo ngokugcwele zonke izinto eziphila kuleli Khanty-Mansiysk Autonomous avtonomnyy. Ezinye izinhlobo zayo eziningi Namanje ayiqondakali kahle, futhi mhlawumbe okwamanje yokuzamazama ngokuphelele.
Ikusasa iyisilwane esisengozini
Eminyakeni eyishumi edlule, kunomkhuba ecacile okwandisa labantu zabantu zezinyoni ezingavamile futhi ezisengcupheni. Ngokwesibonelo, izilwane ezifana KhMAO njengoba amaphiva, Sable, Otter, impisi, obomvu impungushe, musa ezibangela ukukhathazeka ukwesaba. Isibalo sawo siqala kancane, kodwa ezikhulayo namanje. Noma kunjalo, izinto enhlobonhlobo Ibhere elinsundu kanye lynx. labantu yabo vyroslae ngaphezu kwezikhathi ezinhlanu. Yiqiniso, kuningi okusadingeka kwenziwe ukuze lezi zilwane akudingeki isimo ezingavamile, kodwa imiphumela kuthathwe izinyathelo ukubavikela, ungabenza baqiniseke ukuthi ikusasa labo. Ezinye izinhlobo zayo eziningi manje isusiwe Red Encwadi esifundeni. Isibonelo esimangalisayo kulesi - the Izimbila, grouse ptarmigan. Kodwa, ngeshwa, akuzona zonke izilwane zinethemba eliqhakazile ngakho. Unyaka nonyaka labantu reindeer zasendle iye kancane kancane kuncipha. ososayensi abaningi namuhla bathi esikhathini esizayo esiseduze, lolu hlobo inganyamalala ngokuphelele.
Kuvele owumthelela ekuhlaziyeni Oka
Ukwatapheya noma lwengwenya eliphakathi kwe
UMartin Palermo uyindlalifa kaMaradona
Indlela unakekele nendlela ukondla ufudu
Graduate noma impohlo?
"Deksilant": analogue, yokusetshenziswa
KamAZ 53215 - workhorse esinokwethenjelwa othelawayeka
Metal ubuhlalu - enhle, okungavamile, umxhwele!